Villa Somalia oo ka hadashay xarigga Mukhtaar Roobow | KEYDMEDIA ENGLISH
Villa Somalia oo ka hadashay xarigga Mukhtaar Roobow
Mukhtaar Roobow, oo dhawaan loo oggolaaday in ehelladiisu booqan karaan, ayaa hadda helaya war u wanaagsan dhagihiisa oo ka yimid Madaxtooyada Soomaaliya, kaasoo ah in uusan Dowladda u xirneyn.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii la doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ka hadashay xarigga Sheekh Mukhtaar Roobow Cali, [Abuu Munsuur] kaasoo xabsi siyaasadeed ugu jiray Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ku dhawaad muddo afar sano san ah.
Afhayeenka Madaxtooyada Cabdikariin Cali Kaar, oo shir jaraa’id ku qabtay Villa Somalia, ayaa warbaahintu weydiisay waxa Dowladda cusub kaga qorshe ah xarigga, Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali, oo labaduba ku xiran taliska Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka - NISA ee Habar Khadiijo.
Hayeeshee, Cabdikariin Cali Kaar, ayaa si la-yaab leh uga jawaabay weydiintaas, wuxuuna dib warbaahinta ugu celiyay su’aal ah, “Yuu u xiran yahay Mukhtaar?”. Wuxuu yiri, “Waa la soo daayay, baasaboor ayuu sameystay, dhiig ayuu bixiyay qarixii 14 October, Baydhabo ayuu tartan u aaday, Mukhtaar Roobow yuu u xiran yahay?”.
Hadalkaan ayaa ka dhigan in Dowladda hadda jirta uusan Mukhtaar u xirneyn, dibna ugu oggollaan karaan xorriyaddiisa, waxaana xusid mudan in Mukhtaar wareysi uu VOA hore u siiyay uu ku sheegay inuu u xiran yahay Fahad Yaasiin, kaas oo qudhiisa hadda gacan ku ganbad ah, kana cararay dalka, si uu uga baxsado sharciga.
Bartamihii bishii 8-aad ee 2017, Sheekh Mukhtaar Roobow, oo warbaahinta kula hadlay hotel ku yaala Muqdisho, wuxuuna caddeeyay in xubinnimada Al-Shabaab uu ka baxay 5 sano iyo 7 bilood ka hor xilligaas, wada-hallo dhex maray isaga iyo Dowladda Federaalka ayaa sababay in loo fidiyay cafis buuxa.
Roobow, wuxuu qeyb ka ahaa mushkiladda dalka tan iyo markii uu qoriga qaatay, hayeeshee, hadda wuxuu u xiran yahay dano dad gaar ah, Madaxweyne Xasan, waa inuu Mukhtaar Maxakamad saaro, laguna qaado danbiyada uu galay, ama uu sii baritaaro cafiskii Dowladdii hore una oggolaado inuu si xor ah u noolaado.